स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई लक्ष्य दिएर कोविड टीकाकरण अभियान थाल्न लगाउन निर्देश – Sikkim Journal
स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई लक्ष्य दिएर कोविड टीकाकरण अभियान थाल्न लगाउन निर्देश
पश्चिम जिल्लामा कोविड-19 टीकाकरणको स्थितिमाथि जिल्ला टास्क फोर्सको बैठक आज जिल्लापाल कार्यालयमा सम्पन्न भयो। जिल्लापाल कर्मा आर. बोन्पोको अध्यक्षतामा आयोजित बैठकमा शिक्षा विभागका अतिरिक्त निदेशक केसी ग्याछो, सीएमओ डा अनुसा लामा, सीडीपीओ एचबी शंकर, डीआरसीएचओ डा. पत्रिका राई र गेजिङ जिल्ला अस्पतालका कर्मचारीहरू उपस्थित थिए।
बैठकको पहिलो चरणमा जिल्लापालले जिल्लामा अहिलेसम्म कोविड-19 टीकाकरणको स्थितिबारे जानकारी लिए। उनले प्र​त्येक दिन 15 सयको हिसाबले जनसंख्याको आधारमा कम्तिमा पनि 20 हजारको लक्ष्य लिएर अगाड़ी बढ्नुपर्ने सुझाउ राखे। उनले प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई साप्ताहिक लक्ष्य दिन र उक्त लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति उनीहरूलाई आफ्नै रणनीति तयार गर्न निर्देश स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई दिए। उनले वृहत टीकाकरण अभियानबारे जागरूकता फैलाउन महकुमा अधिकारी, बीडीओ र पञ्चायतहरूबाट पूर्ण सहयोगको आश्वासन पनि दिए। उनले टीकाकरण स्थलमा भीड़ नियन्त्रणको निम्ति अतिरिक्त पुलिस कर्मीहरू तैनात गर्ने पनि आश्वासन दिए।
वर्तमानमा बढ्दो कोविड मामिलाबारे बोल्दै जिल्लापालले सबै विद्यालयहरूमा प्रोटोकल कड़ाईका साथ पालनमाथि बल दिए। उनले मौसम अनुसार कक्षा बाहिर सञ्चालन गर्न सुझाउ राख्दै भित्रको तुलनामा घामको किरणमा संक्रमणको सम्भावना कम रहने अवगत बताए। उनले विशेषगरि आवासीय विद्यालयहरूमा बाहिर र भित्रका मानिसहरूबीच हेलमेल गर्नु नहुने बताए। उनले बढ्दो कोविड मामिला रोकथामको निम्ति एकमात्र उपाय टीकाकरण रहेको पनि बताए।
यसैगरी, पश्चिम जिल्लाका सीएमओले जिल्ला अस्पताल र सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आइतबार बाहेक अन्य सबै दिन टीकाकरण गरिने जानकारी गराइन्। बैठकमा अन्तरक्रिया सत्र पनि राखिएको थियो, जसमा उपस्थित अधिकारीहरूले आफ्ना सुझाउहरू राखेका थिए।